‘ओलीको प्वाँख पलायो, जोकरले जस्तो कुरा गरे’ : प्रचण्ड (भिडियो) « Lokpath
‘ओलीको प्वाँख पलायो, जोकरले जस्तो कुरा गरे’ : प्रचण्ड (भिडियो)
काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड–माधव समुहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कलंकको टिका लगाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
बुधवार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड–माधव समुहको काठमाण्डौ भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले संविधान विपरित जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ओली इतिहासमा नै कलंकित हुन पुगेको बताएका हुन् । पटक पटक पार्टी फुटाउने प्रयास असफल भएपछि पछि ओलीले संसद विघटन गरेको आरोप दाहालले लगाए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले आफनो निर्णयलाई राजनीतिक निर्णय भन्दै सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिदै आएको उल्लेख गर्दै ओलीकै ‘जोकर पन’को पछाडि लागेर निर्णय भए मुलुकमा ‘आँधीहुरी बतास’ आउने चेतावनी दिए । ओलीले पार्टीले काम गर्न नदिएर संसद विघटन गरेको भन्दै झुट बोलेर जनतामा भ्रम छर्ने र दिउँसै रात पार्ने काम गरेको आरोप दाहालले लगाए ।
अध्यक्ष दाहालले अध्यादेश ल्याएर र नेकपा एमालेको पार्टी दर्ता गराउन लगाएर पार्टी फुटाउने प्रयास गरेका ओलीलेसंसद विघटन गरेर “घर मै आगो” लगाईदिएको दाबी गरे । संसद विघटन गरेर ओलीले इतिहासमा नै कलंकको टिका लगाएको दाबी उनले गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई “पोलिटिकल जोकर”को संज्ञा दिएका छन् ।
उनले भने “नौटंकी प्रहसन भईईरहेको देख्नुभएको छ । यो विक्षिप्त मानसिकताको उपज हो कि जस्तो लाग्छ । कहिलेकाही साथीहरु विक्षिप्त भएछन् कि भन्ने डर लाग्छ उनीहरुको तर्क सुन्दा । कहिलेकाही साथीहरु जोकरमा परिणत हुनुभएछ क्यारे जस्तो लाग्छ । पोलिटिकल जोकर । जोकर जस्तो लाग्छ । ४ सय ४१ जनाको केन्द्रीय समिति, सय जना जुटेर ११ सय जनाको केन्द्रीय समिति बनायौ भन्ने यो नौटंकी नभए के हो यो ? यो नेपालमा प्रहसन देखाउन खोजेको नभए के चाही हो यो ? यो विक्षिप्त र बहुखुलाहट मानसिकताको उपज नभए के हो ? भनेर हामीले प्रश्न किन नगर्ने ? ”
लोकतन्त्र र राष्ट्रहित विपरित संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले “आईएम त स्टेट” भन्दै संबै संबैधानिक निकायलाई आफु अनुकुल निर्णय गराउन उद्ध्त रहेको आरोप अध्यक्ष दाहालले लगाए । पार्टीभित्र र संसदमा आफ्नो समर्थन गुमाएपछि ओलीले अस्वभाविक ढंगले वक्तव्यवाजी गर्न थालेको आरोप उनले लगाए ।
उनले भने, “सचिवालयमा बहुमत छैन उहाँको । स्थायी र केन्द्रीय समितिमा दुई तिहाई बहुमत उहाँको विरुद्ध छ । सांसदहरुको वहुमत उहाँको विरुद्ध भईसकेपछि त म भएत हेर्नुहोस् देख्ने वित्तिकै राजीनामा दिईहाल्थेँ । त्यो लोकतन्त्रको हितमा हुन्थ्यो । राष्ट्रको हितमा हुन्थ्यो । मैले छोड्नु पर्यो भने कुर्सी सुर्सी भाँचेर छोड्छु । हामीलाई लागेको थियो कुर्सी मात्रै भाँचियो भने त अर्को बनाउला भन्ने लागेको थियो । संविधान नै भाँचकुच । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै भाँचकुच गर्ने अनि राष्ट्र नै भाँचकुच गर्ने स्थिति आयो । अझै उहाँ हासी हासी भन्नुहुन्छ । देश र संविधान वरबात भईरहेका बेला ,संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र धरापमा परिहेका जितेको विजेता जस्तो गरि खुसी भएर । उहाँको नृत्यलाई ताण्डव नृत्य जस्तो लागेको छ । भांङ खाएर नाचेको जस्तो के ।”
प्रकाशित मिति: २०७७,पुष,२९,बुधबार २०:२०
जसपामा मन्त्री छान्ने जिम्मा ३ शिर्ष नेतालाई
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री छान्ने जिम्मा ३ शिर्ष नेताहरुलाई दिएको छ । बुधवार बसेको केन्द्रीय
जसपा सरकारमा जान केही दिन लाग्ने
काठमाडौं । सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन अझै केही दिन लाग्ने स्पष्ट पारेको छ । पार्टीको बुधवार
एमाले महासचिव पोखरेल र नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य बाँस्तोलाबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का महासचिव ईश्वर पोखरेल र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोलाबीच भेटवार्ता
ओलीले सिकाउँदै छन् खराब स्कुलिङ
काठमाडौं । ‘मसँग मानिसहरू गुणगान मात्र गाउँछन् । मेरो कमजोरी कसले देखाइदिन्छ ? त्यसैले पत्रिकाका साथी तपाईंहरूले मेरो सभ्य आलोचना
मदिराले मात्र होइन, अरू कारणले पनि कलेजो खराब हुन्छ
कोरोना विरुद्धको खोप लगाएमा सुनको इँटा देखि करोडौँको फ्ल्याट उपहार
सप्तरीमा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढे
लागुऔषधसहित एक युवक पक्राउ
हातहतियार देखाइ चोरी गर्न खोज्ने छ जना पक्राउ
महोत्तरीमा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु
तुलसीपुरको टरिगाउँ विमानस्थलमा ग्रिनेट बम फेला, सेनाद्वारा डिस्पोज
आज रातिको मौसम : ३ वटा प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना
संगठनभित्रका समस्या सुधार्दै जाने नेपाल प्रहरीको प्रतिवद्धता